China FC-040 Single Udidi Yegalelo Ubushushu Intelligent Controller yoMvelisi kunye Supplier | Gongyi
FC-040 Udidi Igalelo Single Ubushushu Intelligent Controller
FC1-040 series umyalelo imitha ulawulo lobushushu manualThe imitha ledayimenshini ngamazwe standard zangaphandle kunye key-3 ukuqina gentle utshintsho setting, umqolo enye, LED-3 umboniso: Imposiso iqondo lobushushu Ungalungisa, imitha ubushushu okanye umsebenzi okupholisa, uyakwazi ukukhetha ngokukhululekileyo. It uwenza ON / OFF ad ...
Imitha Ubukhulu ngamazwe standard zangaphandle kunye key-3 ukuqina gentle utshintsho setting, umqolo enye, LED-3 umboniso: Imposiso iqondo lobushushu Ungalungisa, imitha ubushushu okanye umsebenzi okupholisa, uyakwazi ukukhetha ngokukhululekileyo. It uwenza ON / OFF hlengahlengiso, umahluko ukubuya anokuthi alungi-lungiswe, ngqo ulawulo iphezulu.
Ⅰ, imigaqo Technical
1, uhlobo Input: NTC10K (B = 3380)
2, Ubushushu ukubonisa Uluhlu: -50 ~ 150 ℃
3, edluliselwe output qhagamshelana umthamo: 7A 240VAC
4, lobukhulu lwangaphandle (mm): 76 × 34 × 72 ubungakanani umngxuma (mm): 70 × 28
5, amandla Ukusebenza: AC110 ~ 242V, 50 / 60HZ, amandla ukusasaza lingaphantsi 3W
6, imvelo Ukusebenza: lobushushu 0 ~ 50.0 ℃, isihlobo humidity≤85% RH, ngaphandle ezinokudla nemitha onamandla zombane.
Ⅱ , Le engaphakathi iparameters
Cinezela ▲ okanye ▼ isitshixo 3 yesibini, ixabiso iseti kunye "" display nitshintshane, cofa ▲ okanye ▼ iqhosha ukulungisa, iqhosha SET ucofe ukuyigcina uphume. Okanye ngaba cofa kancinane naliphi iqhosha kwaye alinde 10 okwesibini, ngokuzenzekelayo imitha ukugcina kunye exit.1, lobushushu elibekwe yenani:
2, Ipharamitha menu yesibini ulungise:
Cofa iqhosha SET for 3 ukungena yesibini menu parameters iwonga yokuphila, ikhowudi parameter kunye nexabiso parameter ukubonisa nitshintshane, cofa ▲ okanye ▼ iqhosha ukulungisa ixabiso parameter, ngokuba cofa ixesha elide iqhosha uyakwazi ukukhawulezisa. Emva kokulungiswa, cinezela SET ukugcina kungena imo elandelayo parameter ukulungiswa. Ukuba ngaba wenze naluphi gabhu ukusebenza, imitha uya kukha alinde 10, okuzenzekelayo ukugcina kunye uphume.
3, Control output:
Zokufudumeza: (Xa parameter of ukukhetha)
Xa value≤ kulinganiswa (ixabiso iseti ixabiso -return umahluko), OUT relay ngokuqhelekileyo qha evulekileyo oxhulumene kwaye OUT Isalathisi ukukhanya phezu, imbawula lisebenza;
Xa value≥ kulinganiswa (ixabiso ixabiso iseti + umahluko nokubuya), OUT relay zoqhagamshelwano evulekileyo ngesiqhelo kobonelelo kunye Isalathisi ukukhanya uphumile, angokokusebenza heater stop.
Ukupholisa: (Xa parameter of ukukhetha)
Xa value≥ kulinganiswa (ixabiso ixabiso iseti + umahluko nokubuya), OUT relay ngokuqhelekileyo qha evulekileyo oxhulumene kwaye OUT Isalathisi ukukhanya phezu, iifriji lisebenza;
Xa value≤ kulinganiswa (i iseti ixabiso ixabiso -return umahluko), OUT relay zoqhagamshelwano evulekileyo ngesiqhelo kobonelelo kunye OUT Isalathisi ukukhanya ngaphandle, angokokusebenza ifriji stop.
4, Imitha kufuneka zihlale efrijini umsebenzi ukulibaziseka: Xa umbane ngomhla okanye uqale isiguquli, kufuneka ukulibala, ixesha akukholibaziso olucwangcisiweyo yi parameter.
Ⅳ , scheme Udibaniso ( dibana)
Ⅴ , Uhlalutyo Icala kunye Clearance
Imitha yamkela phambili inkqubo yemveliso, yaye uvavanyo engqongqo ngaphambi kokuba mveliso, oko kuphuculwe ukuthembeka imitha .Le nandzu yesiqhelo kubangwa ekusebenzeni engalunganga okanye parameter isicwangciso .Ukuba ukufumana isiphoso ayikwazanga ukumelana, nceda ukulibhala, kwaye uqhagamshelane ne-arhente okanye nathi. Sheet 5-1 kona eliqhelekileyo yemitha kwisicelo ngemihla:
★ bathi: inkampani yethu iya kuphucula iteknoloji imveliso, uyilo kunye neenkcukacha. Ukuba utshintsho, nceda zithobe ku lo mbandela into , without notice.
Previous: XMT-908 Series Universal Igalelo Uhlobo Ubushushu Intelligent Controller
Next: XMT-3000 Series Udidi Igalelo Single Ubushushu Intelligent Controller
XMT-JK208 Series Multi Way Tempera Intelligent ...